Fikirakirana ny voka-pifidianana :: Niditra an-tsehatra tamin’ny fanamarinana teny ifotony ny HCC • AoRaha
Fikirakirana ny voka-pifidianana Niditra an-tsehatra tamin’ny fanamarinana teny ifotony ny HCC
Vinavinaina ho tsy te hitsara an-jambany ny voka-pifidia­nana solombavambahoaka. Ho hentitra amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana, natao tamin’ny 27 mey 2019 lasa teo, ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Teboka dimy no nivohitra tamin’ny fampi­- tam-baovao navoakan’izy ireo omaly: ny fidinan’ireo mpikam­bana eo anivon’ity andrimpanjakana ity teny ifotony naka ny voka-pifidianana taorian’ny latsa-bato, ka tsy niandrasany akory ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Anisan’ireo voalaza fa nandehanan’ireo mpikamban’ny HCC ireo boriborintany enina teto an-drenivohitra sy ny teto amin’ny Faritanin’Antananarivo, afa-tsy ny tany amin’ ny distrikan’i Fenoarivobe. Nalain’izy ireo mivantana ihany koa ny vokatra tany amin’ireo distrika mana­morona ny lalam-pirenena fahafito hatrany Fianarantsoa renivohitra sy Moramanga.
Tanjona ny hisian’ny man­ga­rahara amin’ny famoahana ny voka-pifidianana, indrindra manoloana ny faha­vitsian’ny mpifidy tamin’ iny fifidianana depiote iny.
Tsy andairan’ny tsindry
Ankoatra izany, nampiasa ny haitao ara-kajimirindra azy manokana ny HCC rehefa nanomboka nampitaha an’ireo voka-pifidianana eo am-pelantanany sy ireo avy amin’ny Ceni, nanomboka tamin’ny 3 jona 2019 lasa teo. «Efa nanomboka ny fanamarinana an’ireo antontan-kevitra sy ny firaketana an-tso­ratra ny voka-pifidianana, ny fijerena an’ireo izay mety ho lesoka amin’ny fikajiana an’ ireo vato azon’ireo kandidà miaraka amin’ny fangatahana an’ireo biletà tokana ary ireo vato fotsy sy tsy manan-kery teny amin’ny Ceni», araka ny fampitam-baovao avy eny Ambohidahy nivoaka omaly.
Mazava ny hafatra nam­pitain’ny HCC fa tsy handai­tra amin’izy ireo mihitsy ny karazana tsindry na fihetsi­ketsehana mety hataon’ireo kandidà depiote sy ny mpomba azy mikasika ny fanoherana ny voka-pifidianana. Amin’ity faran’ny volana jona ity na amin’ny fiandohan’ny volana jolay 2019 no tombanana fa hamoa­han’ny HCC ny vokatra ofisialy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka.
Fitoriana iraika amby efapolo
Araka ny fantatra dia fitoriana miisa iraika amby efapolo no tonga etsy amin’ny HCC etsy Ambohidahy avy amin’ireo kandidà depiote. Saika fandikan-dalàna tamin’ny fampielezan-kevitra avokoa ireo voarain’ny HCC ireo. Aorian’ny 15 jona 2019, daty hamoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana vonjimaika kosa, no handraisan’ny HCC an’ireo fitoriana manodidina ny voka-pifidianana. Roa andro ihany ny fe-potoana napetraky ny lalàna handraisana an’ireo fitoriana ireo.
Fandosirana gadra :: Noesorina sady miatrika famotorana ny lehiben’ny fonja iray